I-47 uRonin: I-Japanese Samurai Tale
Amashumi amabini anesithandathu amaqhawe anqabileyo ahamba ngokunyuka aze afike kwindlu kwaye atyuke iindonga. Ingqungquthela yavakala ebusuku, "i-boom, boom-boom." I- ronin yaqalisa ukuhlaselwa kwabo.
Ingxelo ye- 47 uRonin yenye yeyona edumileyo kwimbali yaseJapan - kwaye ibali lokwenyaniso.
Ngexesha lexesha laseTokugawa eJapan , ilizwe lalawulwa yi- shogun , okanye igosa eliphezulu lezempi, egameni lomlawuli. Ngaphantsi kwakhe kwakukho amanani ommandla weengingqi, i- daimyo , elowo lalisetyenziselwa amaqhawe amaSamurai.
Bonke aba balawuli bezempi babelindelekile ukuba balandele ikhowudi yebhasido - "indlela yeqhawe." Phakathi kweemfuno zebhasido kwakukho ukunyaniseka kwindoda kunye nokungabi nantloni xa ebhekene nokufa.
I-47 uRonin, okanye abaThengisi abathembekileyo
Ngomnyaka we-1701, umbusi wase Higashiyama wathumela abathunywa beempi ezivela esihlalweni sakhe eKyoto kwi-court shogun e-Edo (Tokyo). Igosa eliphezulu le-shogunate, uKira Yoshinaka, likhonza njengenkosi yemikhosi yokutyelela. Owesibini u-daimyo, u-Asano Naganori wase-Ako noKamei Sama waseTumano, babenomsebenzi omkhulu wokubakho emsebenzini, ngoko ke i-shogunate yabanika umsebenzi wokunyamekela ukuthunywa komlawuli.
U-Kira wabelwa ukuba aqeqeshe i-daimyo kwisiqinisekiso seenkundla. U-Asano noKamei banikela izipho ku-Kira, kodwa igosa lijonge ukuba lingeneli kwaye yavutha ngumsindo. Waqala ukuphatha kakubi i-daimyo emibini.
UKamei wayevutha kakhulu ngonyango oluhlazolayo wayefuna ukubulala uKira, kodwa uAsano washumayela ngesineke.
Eyoyikolisa inkosi yabo, uKamei wayegcina ngokufihlakele uKira imali enkulu, kwaye igosa laqala ukunyanga uKamei. Waqhubeka ehlutyha uAsano, nangona kunjalo, de kube yinto engakwazi ukunyamezela.
Xa uKira wabiza u-Asano ngokuthi "ilizwe elingenalo imbeko" kwiholo ekulu, u-Asano wavula ikrele lakhe waza wahlasela igosa.
U-Kira wahlushwa nje inxeba elingenakuyintloko entloko, kodwa umthetho we-shogunate ugqithisa ngokuthe ngqo umntu ukuba athathe ikrele ngaphakathi kwinqaba yase-Edo. U-Asano oneminyaka engama-34 wayalalelwa ukuba enze i-seppuku.
Emva kokufa kuka-Asano, i-shogunate yayithatha isizinda sayo, yashiya intsapho yakhe ihluphekile kwaye i-Samurai yayo yancinci ibe yimeko ye- ronin .
Ngokuqhelekileyo, ama-Samurai kulindeleke ukuba alandele inkosi yawo ekufeni kunokujongana nokuhlazeka ngokuba ngumSamamura ongenalwazi. Nangona kunjalo, ama-Fortano anesixhenxe ama-Asano amaqhawe angama-320, wanquma ukuhlala ephila aze afune ukuziphindisela.
U-Oishi Yoshio, 47 uRonin ufungile isifungo esiyimfihlo sokubulala uKira kunanoma yintoni indleko. Uloyiko lwesiganeko esinjalo, uKira womeleza ikhaya lakhe waza wathumela inani elikhulu labagcini. UAko ronin wabiza ixesha labo, elindele ukuba uKira aqaphele ukuphumla.
Ukunceda ubeke iKira kumlindi, i-ronin yahlakazeka kwimimandla eyahlukeneyo, ithatha imisebenzi embi njengabarhwebi okanye abasebenzi. Omnye wabo watshata kwintsapho eyakha indlu kaKira ukuze abe nokufikelela kwiimpawu.
UOishi ngokwakhe waqala ukusela kwaye wayichitha kakhulu iindlobongela, wenza umxhelo okholisa kakhulu umntu. Xa i-samamurai esuka eSatsuma yaqaphela ukuba utshwala u-Oishi elele esitratweni, wamhlekisa waza wamkhwaza ebusweni, uphawu lokudeka.
UOishi washawula umfazi wakhe wamthumela kunye nabantwana babo abancinci ukuba bawakhusele. Unyana wakhe omdala wakhetha ukuhlala.
URonin uthathe impindezelo
Njengekhephu lihlanjwe ngokuhlwa ngoDisemba 14, 1702, i-ronin engamashumi amane nesikhombisa yahlangana kwakhona eHoyjo, kufuphi ne-Edo, ilungiselele ukuhlaselwa kwabo. Omnye u-ronin osemncinci wabelwa ukuba aye eAko aze athethe indaba yabo.
Abangamashumi amane anesithandathu baqale balumkisa abamelwane bakaKira ngeenjongo zabo, baza bajikeleza indlu yesikhulu esinezixhobo ezinamakhanda, iinqwelo zokubetha, neenkemba.
Ngomthunzi, enye ye-ronin yanyuka iindonga zendlu kaKira, yatshatyalaliswa kwaye ibophelela ababukeli bebusuku abahlaseleyo. Kwisalathisi somqhubi, i-ronin yahlaselwa phambi nangaphambili. Ama-Samurai kaKira abanjwe belele kwaye baphuthuma ukuze balwe neqhwa.
UKira ngokwakhe, egqoke iimpahla zangaphantsi kuphela, wagijima ukufihla kwisitya sokugcina.
I-ronin yatshengisa indlu iyure, ekugqibeleni ifumanisa ukuxhotyiswa ngokusemthethweni kwiphalazi phakathi kweziqwenga zamalahle.
Ukumkhumbula ngotshaya entloko yakhe yashiya u-Asano, u-Oishi wawa emadolweni waza wanika uKira enye ikakashi ( inkquphe emfutshane) ukuba uAsano wayesebenzisa i-seppuku. Ngokukhawuleza waqonda ukuba uKira wayengenaso isibindi sokuzibulala ngokuzithobayo, nangona kunjalo-igosa lalingabonanga ukuthabatha ikrele kwaye layikrakra. UOishi unqunywe ikhanda uKira.
I-ronin yabuyisela kwakhona kwintendelezo yendlu. Bonke abangamashumi amane anesithandathu babesaphila. Babulala amaninzi amane ama-Samurai ka-Kira, ngeendleko zokuhamba ezine kuphela ezihlaselwe.
Ngomhla wobusuku, i-ronin yayidlula edolophini yaya kwiTempile yaseSengakuji, apho inkosi yabo yangcwatyelwa khona. Ibali lokuphindezela kwabo lisasazeka kwidolophu ngokukhawuleza, kwaye izihlwele zihlangene ukuze zihlakulele endleleni.
UOishi wahlambulula igazi ekhanda likaKira waza walibeka kwingcwaba lika-Asano. Amashumi amane anesithandathu i-ronin wahlala kwaye walinda ukuba abanjwe.
Ukufa kunye nokuzukiswa
Ngoxa i- bakufu yagqiba i-future, i-ronin yahlula yaba ngamaqela amane kwaye yayihlala kwiintsapho ze-daimyo - i-Hosokawa, i-Mari, iMidzuno kunye neentsapho zaseMatsudaira. I-ronin yaba ngamaqhawe esizwe ngenxa yokunamathela kwabo kwi-bushido kunye nokubonakalisa kwabo ngokunyanisekileyo; Abantu abaninzi benethemba lokuba baya kunikwa uxolo lokubulala uKira.
Nangona i-shogun ngokwayo yahendelwa ukuba inike amandla, abaceba bakhe abazange bakwazi ukunyanzela izenzo ezingekho mthethweni. NgoFebruwari 4, 1703, i-ronin yalelwa ukuba ibe ne-seppuku-isivakalisi esasihloniphekileyo kunokuba kwenziwe.
Ukulindela umzuzu wokugqibela uhlaziye, ii-daimyo ezine ezazigcinwe i- ronin zilinde kude kube sebusuku, kodwa bekungeze kubekho ukuxolelwa. I-ronin engamashumi amane anesithandathu, kuquka u-Oishi kunye nendodana yakhe eneminyaka eyi-16 ubudala, wenza i-seppuku.
I-ronin yangcwatyelwa kufuphi nenkosi yayo kwiTempile yaseSengkuji eTokyo. Amangcwaba abo ngokukhawuleza yaba yindawo yokuhambela iJapan. Omnye wabantu bokuqala abaye bayityelela kwakuyi- Samurai esuka kuSatsuma oye wamkhwelisa u-Oishi kwisitalato. Waxolisa waza wazibulala.
Ixesha le-forty-seventh ronin alikho ngokupheleleyo. Ininzi imithombo ithi xa ebuya ekutsheleni iindaba kwiingingqi zekhaya le-ronins yaseAko, i-shogun yamxolela ngenxa yobutsha bakhe. Wahlala ebudeni obudala kwaye wangcwatywa kunye nabanye.
Ukunceda ukuhlaziya isidima esidlangalaleni kwisigwebo esinikwe kwi-ronin, urhulumente ka-shogun ubuyele kwisihloko kunye neshumi kwishumi kwilizwe lika-Asano kumntwana wakhe omdala.
I-47 uRonin kwi-Popular Culture
Ngexesha leTokugawa , iJapan yayinokuthula. Ekubeni ama-Samurai beklasi elinobukroti elincinci lokulwa, amaJapan amaninzi ayesaba ukuba uhlonipho lwabo nomoya wabo bephela. Ibali le-Forty-sixhenxe uRonin lanike abantu ithemba lokuthi amanye ama-Samurai enyaniso ahlala.
Ngenxa yoko, ibali laguqulelwa kwiimidlalo ezininzi zekabuki , imibukiso ye- bunraku puppet, iziprints ze-woodblock, kunye neefilimu kunye nemiboniso ye-TV. Iinguqulelo zeFictionalized zebali zibizwa ngokuba nguChushingura , kwaye ziyaqhubeka ziyaziwa kakhulu kulolu suku. Enyanisweni, iRonin ibanjwe njengemizekelo yebhasido kubaphulaphuli banamhlanje ukulingisa.
Abantu abavela kwihlabathi lonke baya kwiTempileni yaseSengkuji ukubona indawo yokungcwaba ka-Asano kunye ne-Forty-Seven Ronin. Baya kujonga kwakhona irhafu yokuqala eyanikwa ethempelini ngabahlobo bakaKira xa beza kubanga intloko yakhe yokungcwatywa.
UDe Bary, uWilliam Theodore, uCarol Gluck no-Arthur E. Tiedemann. Imithombo Yenkcubeko YaseJapane, Intshumo. 2 , eNew York: i-Columbia University Press, ngo-2005.
Ikegami, Eiko. Ukuluma kweSamurai: UkuHlonipha ngokuBodwa kunye nokwenziwa kweJapan yangoku , iCambridge: i-Harvard University Press, ngo-1995.
Marcon, Federico noHenry D. Smith II. "IChushingura Palimpsest: Omncinci Motoori Norinaga Uyaliva indaba yeAko Ronin evela kumPristi ongumBuddha," iMonumenta Nipponica , Vol. 58, No. 4 (ubusika, 2003) iphe. 439-465.
Kude, Barry. I-Ronin: Ibali likaSamurai Ukunyaniseka kunye nesibindi , iBeverly Hills: Inkcazo yePomegranate, 2005.
Imbali emfutshane yeeJapan zaseDaimyo Lords
Iqela leentyatyambo leentyatyambo eChina
Shintsha i-Spark Plugs yakho
I-Tech-Soft-Stain Painting Technique kaHelen Frankenthaler
5 Iimpawu zokuThumela impumelelo
Ukuguqula iLori lakho ekuphuculeni i-Gas Mileage
Umntu kaThixo: Ukuba ngumfana kwiLizwe likaThixo
Indlela yokudala i-Ent Entry kwiDiving